दुरसञ्चारले दिएन चित्त बुझ्दो जवाफ, अपिलको निवेदन क्षतीपूर्ती समितिलाई – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७४ चैत्र १४ गते बुधबार १७:१८ मा प्रकाशित
दुरसञ्चार कार्यालय पोखराको कारण मानसिक तनाव, आर्थिक नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै अपिल त्रिपाठीले चैत १२ गते सोमबार कार्यालयमै निवेदन दिए । उनले दुरसञ्चारसँग १ लाख क्षतीपुर्ती माग गरे ।
निवेदनपछि कार्यालयले अपिललाई १४ गते बुधबार आज छलफलका लागि बोलायो । तर, दुर सञ्चारबाट चित्त बुझ्दो जवाफ पाएनन् । ‘मैले चित्त बुझ्दो जवाफ पाइनँ । जिल्ला क्षतीपुर्ती समितिमा आज निवेदन दिएको छु’ अपिलले भने ‘समितिमा आज निवेदन दिएपछि टेलिकमलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भन्ने सुनेको छु । क्षती के कती भएको छ, त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने कुरा छ ।’ सुरुमा क्षतीपूर्ती दिने व्यवस्था छैन् भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पत्र पुगेपछि अनुसन्धान गरिने बताइएको उनले सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी क्षतीपूर्ती समितिका अध्यक्ष हुन् ।
अपिलले क्षतीपूर्ती दाबीको निवेदन दिनुको कारणबारे सामाजिक सञ्जालमा सोमबार यस्ताे लेखेका थिए :
‘मैले भर्खरै दुर संचार कार्यालय, पोखरा संग १ लाख रुपैया क्षतिपुर्ती माग गरेको छु । भएको चाही के हो भने – नेपाल टेलिकमको ल्याण्ड लाइन फोन जडान गर्नको लागी आबश्यक सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरे पछी मैले टेलिकमका कर्मचारीलाई सोधे – ‘सर, अब मेरो फोन कहिले जोडिन्छ ?’ उहाँले भन्नु भो – ‘बढीमा ३ दिन भित्र ।’ उहाँले फोन जोड्ने प्राबिधिकको नाम र नंवर दिनु भो । प्राबिधिकले बिभिन्न बहाना गर्दै १ महिना सम्म पनि फोन जोड्न आएनन । ल्याण्ड लाइन फोन लिएपछी फोन चलाए पनि नचलाए पनि मासिक रु.२५० तिर्नै पर्ने नियम रहेछ । १ महिना सम्म पनि फोन नजोडिएपछी मैले टेलिकममा फोन गरेर सोधे – ‘सर मेरो त फोन नै जोडिएको छैन, मैले एक महिनाको त्यो २५० रुपैया तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ उहाँले भन्नुभो – ‘त्यो त तिर्नु पर्छ । तपाईको नंवर रजिष्टर भएको दिन देखिको पैसा लाग्छ ।’ मैले भने – ‘ए हो ? ठिकै छ ।’ अनि बारम्बार गुनासो गरेपछी नेपाल टेलिकमका कर्मचारी फोन जोड्न आए । फोन जोडेपछी मैले उनीहरुलाई भनेको थिए – फोनमा एकदम डिस्टब आको छ, प्लीज मिलाइदिनु होला । तर उनीहरुले वास्तै गरेरनन । त्यसै हिडे । अनि फोन चेक गर्छु त – सेट बाट मोबाइलमा फोन गर्दा घरी एउटा नंवर आउछ, घरी अर्को आउछ । सेटमा फोन गर्दा कहिले शो रुम वालाले उठाउछ, कहिले कल्ले उठाउछ । अत्ति भो । फोनको कारणले मलाई मानसिक तनाव भयो, मेरो समय खर्च भयो र फोन मार्फत गर्नुपर्ने मेरा कामहरु प्रभाबित भए, जसकारण मलाई आर्थिक नोक्सानी भयो । यसको दोषी दुरसंचार कार्यालय पोखरा हो भन्ने मेरो ठम्याई छ । तसर्थ उक्त कार्यालय संग १ लाख रुपैया क्षतिपुर्ती माग गरेको छु । मैले क्षतिपुर्ती पाउछु कि पाउदिन ? नपाउने भए किन पाउदिन ? पाउने भए कहिले र कती पाउछु ? भन्ने प्रश्नको जवाफ लिन कार्यालय प्रमुखले भोली बोलाउनु भएको छ । भोली फेरी जादैछु । भएका सबै कुराहरुको मेरो मोबाइलले पुरै भिडियो पनि खिचेको छु । उचित समयमा सार्वजनिक गर्नेछु ।’